सर्वस्व सहितको जन्मकैदीलाई सर्वस्व सुविधा – Gulminews
Home/अपराध/सर्वस्व सहितको जन्मकैदीलाई सर्वस्व सुविधा
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७५ भाद्र १७, आईतवार १२:०५ मा प्रकाशित
बुटवल–१७ भदौं । आज १७ भदौं कै दिन दुई बर्ष अघि एउटा समाचार लेखिएको थियो । केहि दिन अघि गुल्मीको बाँझकटेरीमा धारिलो हतियारले एक बृद्धको निर्मम हत्या गरिएका अभियुक्तलाई पुर्वपक्षका लागि कारागार चलान सम्वन्धि समाचार थियो त्यो । २०७३ साल असार ३० गतेका दिन साविक बाँझकटेरी गाविस वडा नम्वर–१ का ५९ बर्षिय छत्रबहादुर ओलीको घर लुटपात गर्ने क्रममा छिमेकी जिल्ला प्युठान साविक अर्घा गाविस वडा नम्वर ९ का २२ बर्षिय लेखनाथ गिरी र २० बर्षिय दिपक गिरीले खुर्पा नामको धारिलो हत्यारले ओलीलाई कसाईले मासु काटे झै चकाना चकाना पारेर निर्मम हत्या गरेका थिए ।
त्यसको दोश्रो दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले दिएको सूचनाको आधारमा प्यूठानको बाग्दुल्लाबाट पुर्कोटदह ईलाका प्रहरी कार्यालयको टोलीले ति दुवै जनालाई पक्राउ गरी सदरमुकाम चलान गरेको थियो । २०७३ मंसिर १४ गतेका दिन वलीको हत्या अभियोगी ति दुवै जनालाई तत्कालिन जिल्ला न्याधीश मातृका प्रसाद मरासीनिको इजलासले सर्वोस्वसहितको जन्म कैद सहित अभियुक्तहरुलाई जेल चलान गरेको थियो ।
भन्छन –‘ यस्ता प्रकारका हत्यारालाई कडा भन्दा कडा सजायँ अझ फाँसी कै साजाएँको आवाज उठी रहेको बेला उ चाँही बजारमा हामीलाई धाग दिने गरी मन्केर हिड्छ । उसलाई सजाएँ हो कि मान्छे मारे बापत पुरस्कार ? हामीले यो सवाल गर्न चाहन्छौं त्यस कारागार संग । ’ यस सम्वन्धमा त्यस कारागार प्रमुख गोपाल प्रसाद पाण्डेको ध्यानकृष्ट गराउँदा उनले गिरी त्यस कारगारका ५२ जना वन्दी मध्ये सबै भन्दा असल मान्छेको संज्ञा दिए ।
गत बर्ष सम्म तम्घास बजारका गल्लीहरुमा लडेको अवस्थामा देखिने उनको अवस्था अहिले अज्ञात छ । कारागारलाई सुधार गृह पनि मानिन्छ । तर बन्दी नाईकेहरुको बाहिर निगरानी बढाउन नसके उनिहरु भित्र भित्रै कुलतमा फँस्ने केसीको घटनाले छर्लङ्ग पारेको छ । बाहिर हिड्दा नाईकेहरुको प्रहरीले निगरानी राख्छ भनिए पनि बजारमा एक्लै देखिन्छन । होटल वा अन्य सार्वाजानिक स्थानमा जमघटमा फेला पर्छन । यस प्रति ध्यान दिने कि ? तस्वीरः रातको समयमा ति दुईले लुटपात गर्न थाले पछि जोखाउन थालेका ओलीलाई धारिलोे हतियारले यसरी कत्लेआम गरेका थिए । घर भित्र रगतको पोखरी परेको थियो ।